HERO OF MYANMAR: အစိုးရရဲ့ ဓါတုလက်နက် ဆိုတာ ???
[14:10 |2ဦးကဆွေးနွေးသွားပါတယ်.. ]
အခုမှမဟုတ်ပါဘူး..ဒုတ်ိယကမ္ဘာစစ်မှာတောင်သုံးခဲံတယ်..ကျနော်တို့ နိုင်ငံမှာဆိုလည်း စိစိဝမ်တာပန်တိုက်ပွဲကြီးမှာသုံးခဲံတယ်..မူရင်းထုတ်တာက ဆွစ်ဇာလန်ကပါ..။အောက်ကပုံကိုကြည့်ပါ.
စောကိုဖန် комментирует... @ 29 ноября 2011 г., 21:15
စောကိုဖန် комментирует... @ 29 ноября 2011 г., 21:18
အဒီစောက်ရှုးတွေနဲ. အတိုက်ခံစောက်ရှုးတွေကို ပြလိုက်စမ်းပါ